Xasuuqa Siyaasiyiinta: WQ Sakariye Awaare | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Xasuuqa Siyaasiyiinta: WQ Sakariye Awaare
Xasuuqa Siyaasiyiinta: WQ Sakariye Awaare
Madaxweyne Cigaal ayaa 1996-kii ogaaday in ninkii Cabdalle ee Berbera Maayirka u ahaa uu guriga magaalada ugu ganjeelka weynna dhistay, bahal Eey ah oo Faras la moodana uu ku dhex rabbaystay, musuq iyo wax is daba marinna uu ka dhammaan waayey. Dabeeto intuu u yeedhay ayuu ku yidhi waar Cabdalle bal orod oo $100 kun oo dollar ii keen aan hawlo yaryar ku xalliyee, isna wuxuu ugu jawaabay Madaxweyne khasnnadda ba wax $20 kun gaadhaa kuma jiraan. Cigaal ayaa ku celiyey waar orod oo baaqiga meel uun ka soo amaaho oo la kaalay waynu iska bixin doonnaaye. Odaygii Cabdalle intuu big yidhi ayuu Boqolkii kun dhowr meelood ka soo kala amaahday oo u keenay. Markii uu ka dhaqaaqay ayuu Ina Cigaal warqaddii eriska ka daba geeyey “Duca-qabe xilku waa meerto”. Ninkii haba la eryee lacag dayn ahna waa lagu jaray. Cadhadii maalintaa sidii uu gaadhi weyn oo Muqdisho u raran uu sii Fuulay, toban sanno ka dib 2006 ayuu Hargaysa ka soo degay, dabeeto TV-ga Qaranka oo markaa cusbaa ayuu ka soo muuqday isaga oo aad mooddo inuu tobankaa sannadood ba Isbaaro Xamar ku haystay, hadalladiisii waxaan ka xusuustaa “Madaxweyne Daahir Rayaale ayaan Cafis soo weyddiistay oo tigidhkana ii soo diray”.
abwaan sakariye saxardiid
Previous articleSomaliland new generation needs to know about Somaliland
Next articleBBC Focus on Afrika oo barnaamij maad ah ku soo bandhigtay sababta Afrika u diiddan tahay Aqoonsiga Somaliland
” Israel waan u baahanahay,” Dp World